श्रम सम्बन्धी गुनासो सुन्‍न कल सेन्टर, सिधै मन्त्रीको मोबाइमा पुग्‍नेछ सूचना - Pardeshi Khabar
काठमाडौं : तपाईँ वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशमा हुनुहुन्छ ? वा विदेश जाने तयारीमा हुनुहुन्छ ? आफू जान लागेको काम वा कम्पनीबारे कुनै जिज्ञासा छ ? वा शुल्क कति लाग्ने भन्ने अन्यौलमा हुनुहुन्छ ?
वा तपाईँलाई हालै सुरु भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसँग सम्बन्धित जुनसुकै जिज्ञासा छ ? श्रमसँग सम्बन्धित अन्य कुनै गुनासो छन् ?
अब तपाईँ सिधै सरकारलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको गुनासो सुन्न सरकारले सिंहदरबारमा कल सेन्टर स्थापना गरेको छ। गुनासो सुन्ने अधिकारीले गुनासो हेरी सम्बन्धित निकायमा पठाउनेछन् र द्रुत समाधानको उपाय सुझाउनेछन्।
यदि द्रुत कारबाही भएन भने त्यसको जानकारी स्वचालित रुपमा श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टको मोबाइलमा पुग्नेछ।
सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य रोजगारी सम्बन्धी गुनासो सम्बोधनका लागि सोमबारदेखि ‘कल सेन्टर’ सुरु गरेको हो। यो कल सेन्टरमा नागरिकले वैदेशिक रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, आधाभूत श्रम व्यवस्था र प्रधाननमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका विषयमा आफ्ना गुनासो राख्न सक्नेछन्।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण बिष्टले सोमबार मन्त्रालयमा भएको कार्यक्रममा कल सेन्टर उद्घाटन गरे। ‘श्रम सम्बन्ध, आन्तरिक तथा वैदेशिक रोजगार र सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी सरोकारवालाका गुनासा, जिज्ञासा तथा सुझावहरूलाई प्रत्यक्ष संकलन गरी समस्या समाधान गर्न कल सेन्टर स्थापना गरिएको हो,’ मन्त्री विष्टले भने, ‘वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिम र वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा अपनाउनुपर्ने सुरक्षाबारेका जानकारीहरू लिन सकिन्छ।’
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा गुनासो सुन्न कल सेन्टरको उद्घाटन गर्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट। फोटोः रोशन सापकोटा/रासस
कल सेन्टर मार्फत आएका गुनासोहरूलाई प्राथमिकताका अधारमा सम्बोधन गरिने मन्त्री बिष्टको भनाइ छ। यो सेवा मार्फत शत-प्रतिशत गुनासो सम्बोधन नभए पनि आधाभन्दा बढी समस्या समाधान गर्न सकिने मन्त्री विष्टको विश्वास छ।
‘कल सेन्टरमार्फत शतप्रतिशत गुनासो सम्बोधन नहुन सक्छ,’ उनले भने, ‘कम्तिमा ५०/६० प्रतिशत गुनासो सम्बोधन हुन सके यो जनताको हितमा हुन्छ।’
सेवाग्राहीले सिधै फोन गरी अथवा सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि कल सेन्टरबाट जानकारी लिन तथा गुनासो गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको कल सेन्टरका प्रमुख पारश खरेलले जानकारी दिए।
सेवाग्राहीले गुनासो गर्न स्वदेशबाट भए निःशुल्क ११४१ वा १६६००१५०००५ तथा विदेशबाट भए सशुल्क +९७७-१५९७००८ मा सिधै फोन गर्न सक्नेछन्। खरेलले भने, ‘इमेल, भाइबर, फेसबुक र ट्विटर जस्ता सामाजिक सञ्जालबाट पनि गुनासो गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।’
कल सेन्टरमा अहिले एकै समयमा ४ वटासम्म फोनको उत्तर दिन सकिने व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए। ‘एकै समयमा ४ वटा भन्दा बढी कल आए वेटिङमा बस्छ,’ उनले भने।
सम्बोधन नगरे मन्त्रीको मोबाइलमा सूचना
कल सेन्टरमा आएका गुनासो सम्बन्धित निकायका कर्मचारीले सम्बोधन गरे नगरेको सूचना पनि सिधै मन्त्री बिष्टको मोबाइलमा जाने व्यवस्था भएको उनले बताए।
कल सेन्टरमा काम गर्नका लागि अहिले ९ जना कर्मचारी करारमा नियुक्त गरिएको वैदेशिक रोजगार बोर्डका निर्देशक दिनबन्दु सुवेदीले बताए।
कल सेन्टर बिहान ७ बजेबाट बेलुका ९ बजेसम्म खुल्नेछ। ‘गुनासोको चाप हेरी आवश्कता अनुसार २४ घण्टै खोल्न सकिन्छ,’ मन्त्री विष्टले भने।
« विदेशमा कुनै समस्यामा परेमा अव सिधै सिंहदरवारमा फोन गरौं (Previous News)
(Next News) निर्मला हत्याका ९ महिना : पीडितलाई न न्याय, न शान्ति »